Imfanelo EsiZulwini asinayo lamakilasi kuyinto endaweni epholile, injongo eyinhloko okuyinto - e ibonisa imiphumela inqubo yemfundo. Kube kufanele kube ukwaziswa okuwusizo abafundi kanye nabazali babo. Uma ubhalisa ekhoneni ayikho imithetho ekhethekile noma imikhawulo, ngokuqondene okuyinto kufanele kuphawulwe ukuthi kuyinqubo creative, okuyinto engcono libhekene we uthisha ekilasini, anomsebenzi iwukuba umsebenzi.
Cool Corner imisebenzi elandelayo. Yayo ngezinto ezifunde ke, kumelwe ukwandisa khathizwe abafundi. Ngaphezu kwalokho, kukhona kudingeka sibonakalise hhayi kuphela umsebenzi kwezemfundo, kodwa futhi ukusebenza kwawo ngempumelelo.
Okuqukethwe uthisha ekilasini ngalinye ukhetha ekhoneni ngokuzimela esekelwe izici ekilasini isipiliyoni collective siqu. Kulokhu, nekusebenta okusezingeni eliphezulu yalo msebenzi izotholwa ngaphansi kombandela wokuthi kuyoba ngenkuthalo bazibandakanye kubafundi belandisa.
Ngokuzimela ukudweba ekhoneni cool esikoleni sabaqalayo unga. Uzodinga ephepheni, i izithombe ezimibalabala ezithakazelisayo futhi izithombe, amafayela ecacile, emaphaketheni, iglu, emapeniseli emibala , nokunye. D. Okulandelayo, udinga ukucabanga mayelana umphumela, igoli umsebenzi futhi izingqikithi zayo. Ngakho, iphepha umdwebo kungenziwa kwesokunxele aboncamane nofana usike kuwo noma iyiphi ukuma (inkanyezi, imbali, nokunye. D.). Ngemva kwalokho, abafundi abangaba izithombe ezikhethiwe, izithombe, kanye neminye imininingwane sibekwe kwi ukuma.
Ukuze von wabheka kangcono, kungashiwo ezinemibala ukusebenzisa amakhrayoni nofana ukuhlobisa izimbali ukuphuma ephepheni ezinemibala. Uma wakhipha ekhoneni epholile ngo esikoleni sabaqalayo, kumelwe sikhumbule ukuthi izingane ngalesi yobudala bakhangwa imibala egqamile, ngakho musa abanamathela isitayela esiqinile. Okulandelayo ephepheni ngendlela Cabangisisa ethe njo esobala ifolda-emakhoneni. Abakwazi ukuthi kufakwe noma ulwazi olubalulekile lolwengetiwe, kwenta sibonelo, umsebenzi uhlelo, uhlu ekilasini, lwezikhathi, izihloko ezithakazelisayo noma amaqiniso.
Ingxenye ekhoneni bungabonakala ngokuba lokusungula zezingane. Lapha ungakwazi ukuthumela izithombe, ama-eseyi, izindaba zesikole. Masonto onke Kunconywa ukuba ubuyekeze ulwazi kulesi sigaba ukuze umntwana ngamunye ongabona umsebenzi wakhe ngesikhathi ukuma.
ulwazi ngokwalo kushintshwe kuye ngokuthi engu-abafundi. Kwenta sibonelo, bafundzi emabangeni 1-3 kuyoba lula kakhulu ukuba ufunde indaba, ukuluveza ngendlela umdlalo. Minyaka yonke kunconywa ukugcwalisa ukuma izindikimba eyingozi. Lapho efunda esikoleni esiphakeme, ulwazi kufanele ahanjiswe kudala njengoba ifomu yobuchopho.
Ngaphambi uthisha ozophatha ukwenza ekhoneni cool, imvume kumele nalabaya abafundi. Ndawonye nezingane Kunconywa ukuba sicabangele izihloko, zizokwenziwa zibe agcwaliswa kangaki, ubani ongumgqugquzeli wawo izolandela (olunye ulwazi uthembeke ngokwanele ukuba ubuyekeze abafundi).
Okwamanje isendalini ethulwa emakhoneni ngomumo eyenziwe, kuyinto isifanekiso-abaklami. Zingasetshenziswa njengesisekelo, okuyinto uzodingwa kuphole ekhoneni.
Uma ubhalisa ukuma, ungasebenzisa izinto ziyoyizwa guys. Ngakho, bayokujabulela ukubona ukuthi yiluphi ulwazi posted manje futhi siyoba yini khona ngemva. Yiqiniso, ungathatha imikhiqizo ngomumo eyenziwe ephrintiwe, okwamanje ehlongozwayo okunezinhlobonhlobo esikhulu. Nokho, lokho okuye kwenziwa ngenxa yomsebenzi ahlangene kothisha nabafundi, uyoletha umphumela okukhulu.
Self-yakhelwe endaweni epholile uzohlola ubuqambi we uthisha ekilasini, kanye neqhaza sokuhlanganiswa iqembu umfundi, e ubambisane.
Ubuhlungu emuva esiswini: izimbangela, ukwelashwa, izimpawu
Ukwakhiwa kwemisebenzi yabantu. Inhloso, isisusa somsebenzi
Izifundo ze-Samodelkin: kanjani ukwenza izinto ngamadonki